Fampianarana ambaratonga faharoa Mpampianatra miisa 8500 noraisina ho mpiasam-panjakana
Nampahafantarin’ny tale jeneraly misahana ny fampianarana ambaratonga faharoa sy ny fampiofanana ho an’ny daholobe, Christian Rakotozanany,
tao Antsohihy omaly fa mpampianatra miisa 8500 no noraisina ho mpiasam-panjakana teo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fanofanana arak’asa ho amin’ity taona ity. Efa mandeha ny fizarana ireo taratasy fifanaraham-piaraha-miasa mikasika izany amina faritra maro manerana ny nosy ankehitriny. Nahazo izay anjarany izay moa omaly ny avy eo anivon’ny faritr’i Sofia ka miisa 90 ireo mpampianatra hisitraka izany. Tafiditra ao anatin’izay ireo mpampianatra avy eo anivon’ny teknika. Mikasika ny resa-bola izay mahoraka ankehitriny kosa dia nanazava ny tale fa ireo mpiasa birao ihany no voatokana handray azy iny. Tsy tafiditra ao anatiny kosa ireo mpampianatra satria efa hisitraka ny 50.000 ariary amin’ity volana ity ka ny ambim-bola sisa tamin’ireo nomena ny mpiasa birao no nomena ireo mpampianatra mba hanaovana fety iraisana.